I-Ailika yazisa ngeNdawo yokuFaka isiCelo soMbane waMandla eSola
1. Amandla elanga kubasebenzisi: imithombo yamandla emincinci esusela kwi-10-100w isetyenziselwa ukusetyenziswa kwamandla kwemihla ngemihla kwiindawo ezikude ngaphandle kwamandla, ezinje ngamathafa, iziqithi, iindawo zabefundisi, iipali zemida kunye nobunye ubomi bomkhosi nobokuhlala, njengokukhanyisa , ITV, irekhoda, njl. 3-5kw uphahla usapho igridi-co ...
Siza kuchaza iinzuzo ezizodwa zokuveliswa kwamandla kweSolar Photovoltaic Power
1. Amandla elanga ngumbane ococekileyo ongenakutshiswa, kwaye amandla ombane avela elangeni akhuselekile kwaye athembekile kwaye akazukuchaphazeleka yingxaki yamandla kunye nezinto ezingazinzanga kwimarike yamafutha; 2, ilanga likhanya emhlabeni, amandla elanga ayafumaneka kuyo yonke indawo, amandla elanga e-photovoltaic gene ...
I-Alikai yazisa ngeZinto eziya kuthathelwa ingqalelo kuyilo lwaMandla eSolar Power
1. Qwalasela imeko yokusetyenziswa kwamandla okuveliswa kwelanga kunye nemitha yelanga, njl .; 2. Amandla apheleleyo aya kwenziwa yinkqubo yokuveliswa kwamandla ombane kunye nexesha lokusebenza komthwalo yonke imihla; 3.Qwalasela imveliso yombane yenkqubo kwaye ubone ukuba ilungele ...
Udidi lweSolar Photovoltaic Cell Material Classification
Ngokwezixhobo zemveliso yeeseli zelanga ze-photovoltaic, zinokwahlulwa-hlulwa zibe ziiseli zemiconductor esekwe kwisilicon, iiseli zefilimu ezinqabileyo zeCdT, iiseli zefilimu ezibhityileyo, iiseli ezomeleleyo zedayi, iiseli zezinto eziphilayo njalo njalo. Phakathi kwazo, iiseli ze-semiconductor esekwe kwisilicon zahlulwe ...
Ulwahlulo lweNkqubo yokuFakelwa kweSolar Photovoltaic
Ngokwenkqubo yofakelo lweeseli ze-Photovoltaic elanga, inokwahlulwa ibe yinkqubo yokufaka engadityaniswanga (BAPV) kunye nenkqubo yokufaka edityanisiweyo (BIPV). I-BAPV ibhekisa kwinkqubo ye-photovoltaic yelanga eqhotyoshelwe kwisakhiwo, ekwabizwa ngokuba yi "installation" sola ...
Ulwahlulo lweNkqubo yeSolar Photovoltaic
Inkqubo ye-Solar photovoltaic yahlulwe yinkqubo yokuvelisa umbane ye-photovoltaic, i-grid eqhagamshelwe kwinkqubo yokuvelisa umbane kunye nokusasaza inkqubo yokuvelisa umbane we-photovoltaic: 1. Inkqubo yokuvelisa umbane ye-photovoltaic. Yenzelwe ikakhulu imodyuli yeseli yelanga, ulawulo ...
Ushwankathelo lweeModyuli zePhotovoltaic
Iseli enye yelanga ayinakusetyenziswa ngokuthe ngqo njengomthombo wamandla. Ukunikezelwa kwamandla kufuneka kube linani lomtya webhetri enye, uqhagamshelo olufanayo kunye nokuqiniswa okuqinileyo kumacandelo. Iimodyuli zeFotovoltaic (ekwabizwa ngokuba ziiphaneli zelanga) sisiseko senkqubo yokuvelisa amandla elanga, ikwangowona ungeniso ...
Izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga zeSolar Photovoltaic System
Izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga zeenkqubo zelanga ze-photovoltaic Amandla amandla elanga akanakuphela. Amandla aqaqambileyo afunyenwe ngumphezulu womhlaba anokuhlangabezana nemfuno yamandla ehlabathi amaxesha ali-10 000. Iinkqubo zelanga ze-photovoltaic zinokufakwa kwi-4% yeentlango zehlabathi, ge ...
Ngaba isithunzi sezindlu, amagqabi okanye iGuano kwiiModyuli zePhotovoltaic ziyakuchaphazela inkqubo yokuveliswa kwamandla?
Iseli evaliweyo ye-photovoltaic iya kuthathwa njengokusetyenziswa komthwalo, kwaye amandla aveliswa zezinye iiseli ezingavulwanga ziya kuvelisa ubushushu, ekulula ukubenza bushushu. Ke, ukuveliswa kwamandla kwenkqubo ye-photovoltaic kungancitshiswa, okanye iimodyuli ze-photovoltaic zinokutshiswa.
Ukubalwa kwamandla kweeModyuli zeSolar Photovoltaic
Imodyuli yelanga ye-photovoltaic yenziwe yiphaneli yelanga, ukutshaja isilawuli, inverter kunye nebhetri; Iinkqubo zamandla elanga dc azibandakanyi ii-inverters. Ukuze wenze inkqubo yokuveliswa kwamandla elanga ikwazi ukubonelela ngokwaneleyo kumthwalo, kufuneka ukhethe icandelo ngalinye ngokufanelekileyo ...
Indawo yokuFakelwa kweSibiyeli seSolar Photovoltaic
Ukufakwa kwendawo ye-pv yelanga: uphahla lokwakha okanye udonga kunye nomhlaba, ulwalathiso lofakelo: efanelekileyo emazantsi (inkqubo yokulandela umkhondo), ufakelo I-Angle: ilingana okanye isondele ukufakela ububanzi bendawo, iimfuno zomthwalo: umthwalo, umthwalo wekhephu, iimfuno zenyikima, ulungiselelo nezithuba ...
Ukwahlulahlula izinto zeNkxaso yePhotoVoltaic
Ukuveliswa kwezinto eziphathekayo ze-photovoltaic eziphathekayo, ezisetyenziswa kakhulu kwizixhobo ezinkulu ze-photovoltaic, iimpawu zezinto ezibaluleke ngakumbi, kaninzi nazo zingabekwa kuphela endle, kodwa zifuna ukufakela kwiimeko ezisisiseko ngcono, izixhobo zokusebenza azikho nje ziphezulu. ...